अर्थ – Page2– Pahilo Page
साताको चौथो दिन ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो ? हेर्नुहोस
काठमाडौँ । साताको चौथो दिन अर्थात बुधबार सुनको मूल्य ह्वात्तै घटेको छ । आज छापावाल सुन प्रतितोला १२ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९४ हजार ३ सय रुपैयाँमा कोरोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । हिजो छापावाल सुन प्रतितोला ९५ हजार ५ सय रुपैयाँमा कोरोबार भएको थियो । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतित...
युवाहरुको एउटा सत्प्रयास, १ अर्बको लगानीमा क्वालिटी पेपर उद्योग
चितवन । चितवनको छिमेकी जिल्ला नवलपुरको आरुङ्गखोलामा १ अर्ब रुपैयाँको लागतमा नयाँ कागज उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कागज उद्योगको इतिहास जोडिएको नवलपरासी जिल्ला हाल नवलपुर र पश्चिम नवलपरासीको रुपमा रहेको छन् । भृकृटी कागज उद्योग हाल वन्द रहेपनि तत्कालीन अवस्थामा कागजको जिल्लाको रुपमा परिचित थियो । नवलपरासीको पहिचान फेरि...
ह्वात्तै घटेको सुनको मूल्य फेरि स्वाट्टै बढ्यो, यस्तो छ आजको भाउ
काठमाडौं । बुधबार ह्वात्तै घटेको सुनचाँदीको मूल्य आज फेरि स्वाट्टै बढेको छ । आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेको हो । यस्तै चाँदीको मूल्य पनि आज ८५ रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले दिएको जानकारीअनुसार नेपाली बजारमा आज छापावाला सुन प्रतितोला ९७ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेकोे...
फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ, यस्तो छ आजको बजार मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । बुधबार तोलामै ६ हजार २ सय रुपैयाँले घटेर ९५ हजार ४ सय रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार तेजाबी सुनको मूल्य भने तोलाको ९४ हजार ९ सय तोकेको छ । मंगलबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख १ हजार ६०० र तेजाबी सुनको म...
आकाशै छोयो सुनको भाउले, बनायो अहिलेसम्मकै नयाँ कीर्तिमान
काठमाडौं । नेपालमा आज सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा सुनको मूल्यले एकपछि अर्को फड्को हान्दै कीर्तिमान बनाइरहेको छ । बुधबार छापावाल सुनको मूल्य १ लाख १ हजार ४ पुगेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । मंगलबार प्रतितोला ९९ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बुधबार एकैदिनमा १६०० रुपैयाँले ब...
सुनको मूल्यमा फेरि नयाँ रेकर्ड कायम, कति छ आजको भाउ ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । साताको चौथो दिन अर्थात बुधबार पनि सुनको मूल्य आकाशिएको हो । बुधवार सुनमा प्रतितोलामा ३ सय रुपैयाँले बढेको छ । आज प्रतितोला ९८ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो । हिजो छापावाल स...
चार महिनापछि सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा
काठमाडौं । सरकारसँग सहमतिसँगै लकडाउनका कारण बन्द भएका सार्वजनिक सवारी बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन् । चार महिनासम्म रहेको लकडाउन खुलेसँगै सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका हुन् । यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार भएको छलफलपछि व्यवसायी गाडी चलाउन तयार भएका थिए । जसअनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी ...
सुनको भाउले बनायो एक्कासी नयाँ रेकर्ड, हेर्नुस् आजको भाउ
काठमाडौं । सुनको भाउले आज नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । हिजोको तुलनामा प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले बढेर सुनको भाउ ९४ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । हिजो प्रतितोला ९४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आज तोलामा ५ सय रुपैयाँ बढेको हो । यस्तै चाँदीको भाउ पनि आज तोलामा १० रुपैयाँ ...
कसरी भयो मेलम्चीमा दुर्घटना ? किन दिइँदैछ दुर्घटनालाई राजनीतिक रङ ?
काठमाडौं । लामो प्रतिक्षापछि राजधानीबासीको धारामा मेलम्चीको पानी आउनै लागेको बेला केही दिन पहिले एउटा दुःखद दुर्घटना भयो । जसले गर्दा मेलम्ची आयोजना र खानेपानी मन्त्रालयप्रति धेरैले आशंका, आरोप र प्रश्नहरु तेस्र्याए । यदि त्यो दुर्घटना नभएको भए अहिलेसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौ आउने प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको हुने थियो...
यातायात व्यवसायीहरु बिहीवारदेखि यातायात सञ्चालन गर्न मञ्जुर
काठमाडौं । यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरु बिहीबारदेखि सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्न तयार भएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठन, नेपाल यातायात मजदूर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदूर संघले संयुक्तरुपमा मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरुले साउन ८...